အသင်းထပ်ဝယ်ပြန်တဲ့ မန်စီးတီး သူဌေး ၊ လာလီဂါ ပြန်စမယ့် ရက်တို့နဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
အသင်းထပ်ဝယ်ပြန်တဲ့ မန်စီးတီး သူဌေး ၊ လာလီဂါ ပြန်စမယ့် ရက်တို့နဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
မန်ချက် စတာ စီးတီး အသင်း ကို ပိုင်ဆိုင် တဲ့ အဘူဒါဘီ ယူနိုက်တက် ကုမ္ပဏီ ဟာ ဘယ်လ်ဂျီယံ ဒုတိယ တန်း ကလပ် Lommel SK ကို ပေါင် 1.75 သန်း နဲ့ ဝယ်ယူ လိုက်တယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။ ဒါဟာ အဘူဒါဘီ အုပ်စု ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ၉ ခု မြောက် ဘောလုံး အသင်း ဖြစ်လာ ခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက် စတာ စီးတီး အသင်း ဟာ မာဆေး အသင်း နဲ့ ဒီရာသီ မှာ ပုံစံ ကောင်း ပြသ နိုင်ခဲ့ တဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ် နောက်ခံလူ ဘိုဘာကာ ကာမာရာ ကို ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်ဝင်စား နေပြီး ပေါင် ၂၈ သန်း နဲ့ အပြောင်း အရွှေ့ အထ မြောက် နိုင်ချေ ရှိတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဖီဖာ ဟာ ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲတွေ ပြန်လည် စတင် ချိန် မှာ ကစား သမား ၅ ဦး အထိ လူစားလဲ ခွင့်ပြု သွားဖို့ စီစဉ် နေတယ် လို့လည်း သိရ ပါတယ် ။ ဂိုးသွင်း အပြီး အသင်းဖော် တွေ နဲ့ အောင်ပွဲ ခံ ခြင်း ၊ ရေ နဲ့ တံတွေးထွေးခြင်း ၊ ဂျာစီ လဲလှယ်ခြင်း တွေ ကိုတော့ ပိတ်ပင် တားမြစ် သွားမယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် အသင်း ဟာ စပါး နည်းပြ ဟောင်း ပိုချက်တီနို ကို ခန့်အပ် ပြီးပါက ဘာစီလိုနာ ကွင်းလယ်လူ ဖိလစ်ပီ ကော်တင်ဟို ကို ခေါ်ယူ ဖို့ ကြိုးစား သွားမယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
စပိန် ကွင်းလယ်လူ ဆန်တီ ကာဇိုလာ က သူ ဘောလုံး ကစား ခြင်း ကနေ အနားယူ တဲ့ အခါ မှာ နည်းပြ အဖြစ် အသက်မွေး လိုပြီး အသင်းဟောင်း အာဆင်နယ် ထံ လက်ထောက် အဖြစ် နဲ့ ပြန်လာ ပြီး လေ့လာ သင်ယူ လိုတယ် လို့ ဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး ကလပ်တွေ ဟာ ICC ပြိုင်ပွဲ အပါ အဝင် နွေရာသီ ရာသီကြို ခရီးစဉ်တွေ အားလုံး ရပ်နား လိုက်ရပြီ ဖြစ်တာ ကြောင့် စုစုပေါင်း ပေါင် သန်း ၈၀ ခန့် ဆုံးရှုံး ကြတော့မယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ကစား သမားတွေ ဟာ ယနေ့ မှာ လေ့ကျင့်မှု စတင် ပြုလုပ် ခဲ့ကြပြီး ဗိုင်းရပ်စ် ပိုး ကူးစက်မှု ကနေ သက်သာ ပျောက်ကင်း လာခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူ ရူဂါနီ လည်း ပါဝင် ခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ် ။
စီးရီးအေ ကလပ် ဖီအိုရင်တီးနား ကတော့ သူတို့ ရဲ့ ဆေးစစ်မှု မှာ ကစား သမား ၃ ဦး အပါ အဝင် ဗိုင်းရပ်စ် လက္ခဏာ တွေ့ ရှိသူ ၆ ဦး ရှိခဲ့တယ် လို့ ထုတ်ပြန် ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာကာ ကွင်းလယ်လူ ဗီဒယ် ဟာ လာမယ့် အပြောင်း အရွှေ့ မှာ အသင်း ကနေ ထွက်ခွာ ဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေ ပေမယ့် ယခု အချိန် အထိ တရားဝင် ကမ်းလှမ်းမှု တစ်ခု မှ ရောက်မလာ သေးဘူး လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ မန်စီးတီး အသင်း တို့ ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ Project Restart အစီအစဉ် ကို ထောက်ခံ မဲ ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး လို့ မန်ချက်စတာ ညနေခင်း သတင်းစာ က ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အေစီ မီလန် အသင်းဟာ ရီးရဲ တိုက်စစ်မှုး လူကာဂျိုဗစ် ကို စိတ်ဝင်စား နေပြီး ရီးရဲ တို့ ဝယ်တုန်းက ဈေးထက် ထက်ဝက် နီးပါး နည်းတဲ့ ပမာဏ ( ပေါင် ၃၅ သန်း ) နဲ့ ခေါ်ယူ နိုင်မယ် လို့ မျှော်လင့် ထားကြောင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး အသင်း ဟာ ဝါဒါဘရီမင် ကစား သမားလေး မီလော့ ရာရှီကာ ကို ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်ဝင်စား နေပြီး ကစား သမားလေး ဟာ ဘရီမင် အသင်း တန်းဆင်း ခဲ့ရပါက ပေါင် ၁၃ သန်း တည်းဖြင့် အသင်း ပြောင်းရွှေ့ နိုင်တဲ့ အချက် အလက် ကို စာချုပ် မှာ ထည့်သွင်း ချုပ်ဆို ထားတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်း ဟာ ဆီဗီးလား တောင်ပံ ကစား သမား လူးဝစ် အိုကမ်ပိုစ့် ကို ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်ဝင်စား နေပြီး အာဆင်နယ် ကို အငှားချ ထားတဲ့ ဒါနီ ဆီဘယ်လော့ + ငွေသား တို့ နဲ့ ကမ်းလှမ်းဖို့ စိတ်ကူးနေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အင်တာ မီလန် အသင်း ကတော့ ရီးရဲ နဲ့ ဘာစီလိုနာ တို့ စိတ်ဝင်စား နေတဲ့ ဘိုင်ယန် ဝါရင့် နောက်ခံလူ ဒေးဗစ် အလာဘာ ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား လာခဲ့တယ် လို့ လည်း သိရ ပါတယ် ။
လာလီဂါ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဟာ ဇွန်လ ၂၀ ကနေ ဇူလိုင် လ ၂၆ ရက်နေ့ အတွင်းမှာ လက်ကျန် ပွဲစဉ် အားလုံး ကို အပြီးသတ် ကစားမယ် လို့ သတင်း ပေးပို့ထား ကြောင်း လီဂါနက်စ် အသင်း အကြီးအကဲ က ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဂီတာဖေး အသင်း ဥက္ကဌ အိန်ဂျယ်တောရက်စ် ကတော့ ဒီရာသီမှာ အသင်း အတွက် တစ်ရာသီစာ လက်မှတ် ဝယ်ယူ ထားတဲ့ ပရိသတ် ၁၃၅၀၀ ဟာ လာမယ့် ရာသီ အတွက် တစ်ရာသီစာ လက်မှတ်တွေ ကို အခမဲ့ ရယူ နိုင်မှာ ဖြစ်တယ် လို့ ပြောဆို အတည်ပြု သွားခဲ့ ပါတယ် ။